Maxay u egtahay guusha dumarka ugu badan sanadka 2020? | Ragga Stylish
Maqaalkan waxaan ka hadli doonaa muuqaalka ragga taas oo hadda haweenka ku guuleysata, laakiin sidoo kale waxaan ku siin doonnaa xoogaa talooyinka aan waqtiga lahayns, iyadoo ujeedadu tahay inaad qeexdo qaabkaaga gaarka ah ee kaa caawinaya inaad aragti fiican ka qaadato iyaga oo kaa dhigaya mid soo jiidasho leh. Intaas waxaa sii dheer, qaybta ugu dambeysa waxaan kugula talin doonaa xoogaa tilmaamo ah oo ku saabsan imagen taasi waa in laga sii daayaa baraha shukaansiga.
1 Talada ugu horeysa waa inaad run ahaataa naftaada
2 Fiiro gaar ah u yeelo faahfaahinta yar
3 Ka faa'iideyso isbeddelka hadda socda ku soo noqo qaabkii 90-meeyadii
4 Suudhka loogu talagalay ayaa had iyo jeer ku guuleysta xaflad kasta
5 Nooc funaanad ah oo iftiiminaya qayb ka mid ah anatomy-ka ragga oo dumarku aad u jecel yihiin
6 Talooyin maskaxda lagu hayo shukaansi goobaha
Talada ugu horeysa waa inaad run ahaataa naftaada
Iskusoo wada duuboo, soo jeedinta ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ah inaadan joojin inaad runta naftaada u noqoto, tan iyo sida aan u labisano waa a milicsiga shakhsiyadeena, waana lagama maarmaan in laga fogaado taas adoo aadaya isbeddelkii ugu dambeeyay ee aad siiso dareenka taas waad isqaawisay wax aadan ku qancin, ama laga yaabo inaysan ahayn hadba da'daada.
Fiiro gaar ah u yeelo faahfaahinta yar
Waxa aan aad ugula talinayno waa inaad daryeesho faahfaahinta, waa wax kujira dumarka fiiro gaar ah ayey u leeyihiinAma hadaanay ahayn, maxaad ugu malaynaysaa inay jiraan wax soosaarka quruxda iyo agabka qurxinta leh Mararka qaarkood alaabooyin iyo maqaallo wax ka qabta waxa aan u maleyno inay yihiin wax yar, laakiin iyaga maahan.
Sidaa darteed, in la siiyo tusaale haddii halkii laga qaadan lahaa kuwa caadiga ah sharaabaadyo madow bland aad ku dhiiratid wax yar hindiso, had iyo jeer adigoon ka bixin qaabkaaga, waxaad dhibco kuheli kartaa faahfaahin aan ku xaqiijin karno inay go'an yihiin.
Ka faa'iideyso isbeddelka hadda socda ku soo noqo qaabkii 90-meeyadii
Sidoo kale maskaxda ku hay in xitaa halista guud aan dhihi karno in haweenku u nugul yihiin moodooyinka. Marka haddii tusaale ahaan tan 2020 waxaa jira a Soo nooleenta 90s, waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan taas gasho dharkaaga wax dharka in uu noqday isbeddel mar kale: funaanadaha plaid, funaanado daabacan, iwm. Ilaa iyo inta aad jeceshahay iyaga, waxaad dareemeysaa raaxo leh iyaga oo xiran iyaga waxayna la mid yihiin kuwaaga shakhsiyadda y qaab u gaar ah.
Suudhka loogu talagalay ayaa had iyo jeer ku guuleysta xaflad kasta
Laakiin haddii uu jiro mid sharad aamin ah waxa aad sameyn karto adigoon ka baqayn moodooyinka taas waa suud laga sameeyay si loo qiyaaso dawaarle, maaddaama nin labiskiisu aan fiicnayn uu yahay wax qof walba aad u jecel yahay. Ok waa lacag laakiin u maleyso inay tahay a maalgashi in ay u qalanto xafladda aad ka heli doontid aroosyada, Sannadaha Cusub, iwm.
Ka soo horjeedka waxa iyaga ku dhaca, kuwaas oo aan inta badan u isticmaal labis isku mid ah dhowr dabaaldegyo noocan ah (iyo in ka yar hadda oo dhacdo kasta lagu sawiro baraha bulshada) ma jiraan wax caqabad ah oo raggaas la xiriira, oo tegi kara ku soo noqnoqoshada oo kala duwan oo keliya xiriirada iyo haddii wax shaati.
Nooc funaanad ah oo iftiiminaya qayb ka mid ah anatomy-ka ragga oo dumarku aad u jecel yihiin
Sidoo kale markaad sameysid a dharka dharka soo jiidashada leh Way fiicantahay in maskaxda lagu hayo inay jiraan qaybo ka mid ah anatomy-ka ragga oo dumarku jecel yihiin laakiin taasi ragga muhiimad badan ma siinayaan, midkood ayaa tusaale ahaan ah qoorta. Taasi waa sababta ay u badan yihiin jilayaasha hollywood inay u adeegsadaan sawirradooda xayeysiinta ah shirts kuwaas oo iyaga muujiya, sida ay yihiin kuwa qaababka 'digaag'.
Sidoo kale, waxaa aad muhiim u ah inaad xirato waxaad xirato oo gudbinaya dareenka ka taxaddar muuqaalkaaga, laakiin adiga oo aan ku dhaafinIskusoo wada duuboo, isagu wuxuu dhigaa raganimo oo iyagu ma yeelan doonaan nin aad uga walwala muuqaalkiisa. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in dharka aad xirato waxaad uxiraneysaa si dabiici ah, adoo ka fogaanaya dareenka ah in wax kasta oo aad xidhato ay ka mid yihiin a daraasad eeg.
Talooyin maskaxda lagu hayo shukaansi goobaha
Sidoo kale, waa lagama maarmaan in la ogaado sida loo kala saaro sida loo labisto munaasabad kasta, sidaa darteed haddii, tusaale ahaan, aad isticmaasho qaar ka mid ah bogagga xiriirka ee badan ee Isbaanishka, waxay noqon doontaa dhibic wanaagsan oo aad ku qanacsan tahay oo aad geliso bogga noocyo kala duwan inaad haysato sawiradaada oo kujira xaalado kaladuwan, taas oo kuu ogolaaneysa inaad muujiso qaabkaaga labiska xaaladaha kala duwan: markaad la baxdo asxaabtaada, dabaaldeg gaar ah, nasashada guriga, iwm.
Waxa aan kugula talineyno ayaa ah xitaa haddii aad murqo badan tahay xaddid sawirada feedhaha leh sida ugu macquulsanah meel aad u muuqata iyo shakhsiyaadka. Ku dhajinta wax ka badan muujinta iyo dabiiciga ayaa hubaal u ah hantida inay ku shukaansato wadada ama bogagga shukaansiga.
Waxaan rajeyneynaa in talooyinkani ay waxtar kuu yeelan doonaan, u maleyso in waxa ugu horeeya ee haweeneyda ay kugu xukmineyso adiga ay tahay waxa aad ku aragto jaleecada hore, taas oo ah muuqaalkaaga, tanina waxaa inta badan lagu ogaadaa sida aad u labisato, ha sameyn aan dhaafno fursadda ah inaan aragti fiican ka dhigno!
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Maxay u egtahay guusha dumarka ugu badan sanadka 2020?
5 fikradaha hadiyadaha ee waalidiinta